Sithelekisa i-Samsung Galaxy Fold kunye neHuawei Mate X | Iindaba zeGajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | | Iiselfowuni, Imiboniso
Kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo besingazi ukuba lo iya kuba ngunyaka wokusonga ii-smartphones. Amarhe, uqikelelo kunye namanye amarhe, kodwa akukho datha isemthethweni eya kusivumela ukuba siqinisekise ukuba izikrini ezisongelayo ziya kufika ngoku. Kwaye, ngokungathi akukho nto, Ngeentsuku nje ezimbalwa sineemodeli ezimbini ezisemthethweni kwintengiso. Isamsung yade yaveza iGlass X ekudala ilindelwe. Kwaye izolo iHuawei, inika isimanga kwaye ngaphandle kokuvuza phakathi, yajoyina umkhwa weefowuni ezisongwayo.
Umzali umzali Lixesha elivulekileyo kwaye kunokwenzeka ukuba i-Samsung kunye neHuawei zilandelwe ziifemu ezininzi. Ii-smartphones ezinokusongelwa yingcinga ye-smartphone 'esandul' ukuzalwa. Kananjalo, ngokomgaqo ngokubanzi banamagumbi amaninzi okuphucula, kunye neenkcukacha zokuzipolisha. A Itekhnoloji esandula ukufika sijonge phambili ekwamkeleni kwaye iyakuba yinto ekugxekwa ngayo kunye nokudumisa. Namhlanje Siza kuthelekisa ezi modeli zintsha ukuxelela ukuba bafana njani kwaye bahluke njani.
1 Izikrini ezisongelayo sele ziphakathi kwethu
2 I-Samsung Galaxy Fold Vs iHuawei Mate X
3 Thelekisa itheyibhile yeGolden Fold kunye neHuawei Mate X
Izikrini ezisongelayo sele ziphakathi kwethu
Kudala sifuna ukukuxelela malunga nefowuni yokuqala eguqukayo yokubonisa. Ngeli xesha asizukuyenza le nto kuqala kuphela, Siza kuthelekisa ukubheja ezimbini ezintsha ngale nto inomdla ye-smartphone njengomngcipheko. Inkqubo ye- Samsung Galaxy Fold. Kwaye umntu omtsha Huawei Mate X, engashiyanga mntu engenamdla.
Izinto zinomdla kakhulu kwi-ecosystem yethu ye-smartphone. Kubonakala ngathi Sibona utshintsho olubalulekileyo kwezi ntsuku. Ukwazi iifomathi ezintsha ze-smartphone ukuza kuthi ga ngoku, kwaye le yinto esiyithandayo. Kusenokwenzeka ukuba kwixa elizayo, kule nyanga kaFebruwari 2019 kuyakuthethwa ngayo njengalo mzuzu wokutshintsha kwemarike. Nangona kunokwenzeka ukuba le nto ayigqibi kuphumelela njengoko besazi njalo.
Omnye wemiqobo emikhulu apho iifemu eziza kudibana nazo ziya kuba, ubuncinci okwangoku, iindleko eziphezulu zokuvelisa. Isikhubekiso esibalulekileyo njengoko oku kuthetha ixabiso lentengiso liphezulu. Kwaye sele siyazi ukuba ixabiso libaluleke kakhulu. Ngakumbi xa sithetha ngetekhnoloji apho usemninzi umsebenzi wophuhliso ngaphambili. Ixesha, ngakumbi oovimba, liza kusixelela okwethutyana ukuba intengiso iza kusabela njani kolu hlobo lutsha lwefowuni.
I-Samsung Galaxy Fold Vs iHuawei Mate X
Kufuneka siyiqonde loo nto i-Samsung Galaxy Fold isishiye sivule imilomo kumnyhadala wokubonisa kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo. Ingcinga yefowuni ebesinethemba lokuba ekugqibeleni siza kuyazi ukuze sifumane umbono wokuba ukusebenza kwayo kunye nokujongana kuya kuba njani. Ifowuni yayithandwa ngabalandeli beSamsung kunye nabagxeki. Bonke bayazi ngokuba ngaphambi kotshintsho olubalulekileyo kwintengiso. Ukuthelekisa ngomhla wayo ukuya kwinguqulelo yokuqala ye-iPhone. Eyokuqala yeefowuni ezisongekileyo ekugqibeleni ifikile, kwaye yenze njalo ivela kwi-Samsung.
Kodwa izolo uHuawei uyenzile kwakhona. Okunye Ifowuni esongelayo ebesingazazi nokuvuza kuyo. Ngobusuku nje obudlulileyo, kunye nepowusta ebibekwe kwi-MWC, apho sinokufumana uluvo lokuba uHuawei naye wayefumana uloliwe "oguqukayo". I-MWC yalo nyaka ibonakale ngathi ayinasiphelo okoko inkcazo ebalulekileyo ye-Samsung yayikho ngaphambi kokuqala. Kodwa uHuawei ebephethe umsebenzi wokuvelisa ulindelo esasicinga ukuba siza kuphoswa
Ixesha lifikile lokuba zibeke ezona zixhobo zibalulekileyo kwintengiso yobuso. Kwaye nangona iqinisekile ngakumbi ukuba kungekudala siza kuba nabantu esiza kukhuphisana nabo kolu thelekiso, kufuneka siqaphele isibindi seSamsung kunye neHuawei ngokuba ngabokuqala ukuqala kolu lonwabo. Ukuba olu hlobo lwesixhobo luyadityaniswa Siza kuhlala sikhumbula ukuba i-Samsung ibinguye okhokele indlela. Kwaye loo Huawei ilandele ngokusondeleyo kwasekuqaleni.
Eyona nto ibalulekileyo, i-Samsung Galaxy Fold kunye neHuawei Mate X ziyafana, i-smartphone enokusongwa. Kodwa ukuba sijonga ekwakhiweni kwayo sifumana Umahluko omninzi ngokwasemzimbeni kunye nokusebenza. Ngokuqinisekileyo, I-Samsung Galaxy Fold inesikrini, esinokuyibiza "Ngaphandle", kunye ne Isikrini "sangaphakathi", esisongelayo. Utshintsho olusuka kwiscreen esilubonayo kwifowuni esongiweyo ukuya ngaphakathi xa ivuliwe ifezekiswe kakuhle. I-Huawei Mate X, kwelinye icala, inayo isikrini esinye esisifumana ngaphambili kwaye sisonge ngqo phakathi.
Thelekisa itheyibhile yeGolden Fold kunye neHuawei Mate X
Nantsi itafile yokuthelekisa phakathi kwezixhobo zombini. Gcina ukhumbula ukuba kukho izinto ezingaziwayo okwangoku. Ngokubhekisele kwisixhobo seHuawei, kukho ulwazi ngokubhekisele kwizixhobo zokusebenza ezingekabikho esidlangalaleni. Kwaye nexabiso lokuqala "liyabonisa" kuba alikho semthethweni ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, iya kusinceda ukuba sibone ukuba ziyafana njani kwaye ngakumbi zahluke njani kwezi zimbini ii-smartphones.
Umzekelo Galaxy Fold Umtshato X
Isikrini esongiweyo 4.6 intshi HD Plus Super Amoled 6.38 okanye 6.6 intshi (ngokuxhomekeke kwicala)
Vula isikrini 7.3 intshi 8 intshi
Ifoto yekhamera Ikhamera ye-angle ebanzi kathathu-ebanzi kunye nefowuni i-engile ebanzi-i-engile ebanzi kunye nefowuni
Inkqubo Snapdragon 855 Kirin 980
Imemori ye-RAM 12 GB 8 GB
Ukugcina 512 GB 512 GB
Ibhetri 4380 mah 4500 mah
U bunzima 200 g 295 g
Amaxabiso aqikelelweyo 1900 € 2299 €
Njengoko besitshilo, Zombini izixhobo zabelana ngeempawu ezininzi kunye nezibonelelo. Kodwa bahlukile kwezinye ezininzi. Enye yeenkcukacha apho sifumana khona umahluko omkhulu ziikhamera. Isamsung I-Galaxy Fold inekhamera yangasemva kathathu xa ivaliwe, kunye nekhamera engaphambili emibini kwinxalenye evulekileyo yesikrini.
I-Mate X, kwelinye icala, ineekhamera ezintathu kuphela que ngefowuni esongiweyo babeza kuba ngasemva, kodwa ntoni xa uyivula, ngabo ngaphambili. Iikhamera ezincinci kwi-Mate X kodwa akukho amathuba amancinci. Singathatha imifanekiso Iiselfie ezinekhamera enye nesithatha ngayo iifoto "eziqhelekileyo". Ngaba uyayithanda enye yezi zimbini? Uyazithanda zombini? Okanye ngokuchaseneyo, le fomathi ayikwenzi uqiniseke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Sithelekisa i-Samsung Galaxy Fold kunye neHuawei Mate X